Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay xaaladda dalka | KEYDMEDIA ONLINE
7 March 2021 Midowga musharaxiinta oo dalbaday in lasii wado wada-hadalladii fashilmay
6 March 2021 Booliska oo fahfaahin cusub ka bixiyay Qaraxii Muqdisho
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay xaaladda dalka
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Midowga Musharixiinta, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arimaha la xariira doorashooyinka iyo amniga.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shariif Sheekh Axmed, wuxuu rajo xumo ka muujiyay xaaladda uu wadanku ku jiro isagoo sheegay in aan wali la xilin khilaafaadka ka jira arimaha Doorashooyinka. Mucaaradka uu hoggaamiyo ayuu sheegay in mar walba aragtidoodu tahay in la helo doorasho xor iyo xalaal ah.
Sheekh Shariif, wuxuu carabka ku dhuftay hadal heynta ugu weyn ee hadda taagan oo ah, haddii 8 Feebaraayo 2021, la gaaro iyadoo aan dalka doorasho la isla ogol yahay ka dhicin ama ka hor aan heshiis la gaarin maxaa dhici doona?.
“Mararka qaar waxaa la is weydiiyaa 8 Febaraayo haddii la gaaro maxaa dhacaaya, inaga rajadeynu waxa waaye in kahor laga hshiiyo nidaamka Doorashooyinka, sidaasna doorashooyinku noogu qabsoomaan”, ayuu Shariif Sheekh Axmed.
Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta, ayaa ku taliyay in la joogteeyo waxa uu ugu yeeray dhaqan-kii wanaagsanaa ee ahaa in afartii sanaba mar doorasho aan qeylo ka daba yeereyn ay ka dhacdo dalka.
Sheekh Shariif oo sidoo kale ka hadlay xaaladda amni ee dalka ayaa sheegay in amni darada wadanka ay qeyb ka tahay kala taagnaanta dadka Soomaaliyeed.
Midowga musharaxiinta oo dalbaday in lasii wado wada-hadalladii fashilmay
Warar 7 March 2021 11:17
Golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa dalbaday in lasii wado wada-hadalladii udhaxeeyay iyaga iyo RW xil gaarsiinta ah ee Xukuumadda Soomaaliya Rooble
Warar 7 March 2021 11:04
Booliska oo iska indha-tiray digniinta Qaraxii Luul Yemeni
Warar 6 March 2021 20:58
Warar 6 March 2021 20:39